တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူကို သွေးခွဲခြင်း
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တပ်မတော်၏ ရပ်တည်ချက်ကို လက်မခံခြင်း
နောက်ကွယ်က နှောင်ကြိုးများကို မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းတို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့ကြားသိနေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီး တပ်မတော်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းသဖွယ် ပြုမူ ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းများကိုလည်း အထောက်အထားများနှင့် ရှင်းပြလိုပါတယ်။
Posted by ရွှေတံခါး at 3:23 AM5comments
တစ်ဒေါ်လာ ၈၂၀ ကျပ်နှုန်း တရားဝင် သတ်မှတ်မည်
ယခင်က မြန်မာအစိုးရ သတ်မှတ်ထားသည့် တရားဝင်ပေါက်ဈေးမှာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် ၆ ကျပ်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြင်ဈေးကွက် (အစိုးရမဟုတ်သောဈေးကွက်)မှာတော့ ၁ ဒေါ်လာလျှင် ၈၀၀ ဝန်းကျင် ဈေးပေါက်ပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မှာတော့ ၈၀၀ ကျပ်နှင့် တွက်သည်ဟု လွှတ်တော်မှာ ပြောသည်။ ဤဈေးကြောင့် ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲရန် အကြောင်းမရှိဟု ပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြသည်။ ဤငွေလဲနှုန်း ပြုပြင်လိုက်၍ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များစွာဝင်လာမည်ဟု တွက်၍မရနိုင်ဟုလည်း ဆိုသည်။ မြန်မာပြည်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် တခြားအခြေခံ အဆောက်အအုံများ လိုအပ်နေသေးသည်။ ထို့နောက် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများ စိတ်ချယုံကြည်လောက်သည့် ဥပဒေလည်း လိုသေးသည်။ လောလောဆယ်မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှု ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းမှုများ လုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများက အဆင့်နိမ့်နေသေးကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ အရည်အချင်း တိုးတက်လာမှ နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ ငွေလဲနှုန်းကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်အပြင် စီမံခန့်ခွဲမှုလည်း လိုအပ်နေသေးသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုကို တည်တံ့အောင်လုပ်ရန်လည်း လိုသည်။ ဘဏ်ဥပဒေများကိုလည်း ပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုလည်း ပြင်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ် ဧပြီလမှ စတင်၍ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်း နှုန်းရှင်စနစ်ဖြင့် ငွေလဲနှုန်းကို ကျင့်သုံးရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၈၂၀ ကျပ်နှုန်းမှာ လာမည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဓိကကမူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လာသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဝင်ငွေများသည် တိုင်းပြည်အတွက် လူထုအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိ၊ မရှိနှင့် ၄င်းငွေများ ပြည်သူလူထု ခံစားရမှသာ တိုင်းပြည်အကျိုးရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
Posted by ရွှေတံခါး at 11:26 PM0comments
ဖားကန့်၊ မိုးကောင်း၊ ဗန်းမော်၊
စစ်ကိုင်း၊ ပုလဲ၊ မင်းကင်း
တောင်ငူ၊ ထန်းတပင်၊ သနပ်ပင်၊ လက်ပံတန်း၊
(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၅) နေရာ
မကွေး၊ ရေစကြို၊ မြိုင်၊ ပခုက္ကူ၊ ပွင့်ဖြူ
(ခ) အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁)နေရာ
(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၀)နေရာ
ဇဗ္ဗူသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ဥတ္တရသီရိ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ နွားထိုးကြီး၊ တံတားဦး၊ မဟာအောင်မြေ၊ မိတ္ထီလာ၊ ပြင်ဦးလွင်။
(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁)နေရာ
(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၆)နေရာ
ကော့မှူး၊ သုံးခွ၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)၊ မရမ်းကုန်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ လှည်းကူး။
(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၅)နေရာ
ပုသိမ်၊ မအူပင်၊ မြောင်းမြ၊ ၀ါးခယ်မ၊ မြန်အောင်
(ဂ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁)နေရာ
မိုကောင်းမဲဆန္ဒနယ်တွင် ၀င်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်လောင်များ အမည်စာရင်း
၁။ ဦးမိုးမြင့်မြတ် (NDF)
၂။ ဒေါ်ခင်ကြည် (NLD)
၃။ ဦးစိုင်းသန်းတင့်အောင် (SNDP)
၄။ ဦးထွန်းထွန်းအောင် (USDP)
၅။ ဒေါက်တာတူးဂျာ (တစ်သီးပုဂ္ဂလ)
ဗန်းမော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ၀င်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်လောင်များ အမည်စာရင်း
၁။ ဦးဘမြင့် (NLD)
၂။ ဦးတင်ဌေး (တစည)
၃။ ဦးမြင့်စိုး (USDP)
ဖားကန့်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ၀င်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်လောင်များ အမည်စာရင်း
၁။ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ (NDF)
၂။ ဦးစိုင်းသိန်းထွန်း (USDP)
၃။ ဦးဒါရှီလဆိုင်း (NLD)
၁။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ
၅။ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ(မြန်မာ)
Posted by ရွှေတံခါး at 11:23 PM0comments
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဥပဒေအရ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေက လာမယ့် မတ်လ ၃၀ ရက်နဲ့ ၃၁ ရက် နံနက် ၆း၀၀ နာရီကနေ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေမှာ ကြိုတင်မဲပေးရမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက မဲရုံကို ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာကနေ ကြိုတင်မဲ တောင်းခံပြီး ကိုယ်တိုင်ကြိုတင် ဆန္ဒပြုထားတဲ့ မဲလက်မှတ်ကို လုံခြုံအောင် စာအိတ်နဲ့ ပိတ်ထည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကို ပေးပို့တဲ့ မဲလက်မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးက ကြိုတင်မဲတွေကို ပါတီတွေက ရွေးချယ်ထားတဲ့ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေရှေ့မှာပဲ မဲရေတွက်သွားမယ်လို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ယူဖြေကြားပေးသူ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးထံက သိရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်ကို ပေးပို့တဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကိုလည်း ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၆း၀၀ နာရီမတိုင်မီ မဲရုံမှူးဆီ ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းတစ်ဦးက “၂၀၁၀ တုန်းက ဒီမြို့နယ်မှာ ရတဲ့ကြိုတင်မဲက သုံးရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ ကြိုတင်မဲကြောင့် နိုင်သွားတာ၊ ရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ကြိုတင်မဲမှာ မဲလိမ်တာမျိုး မရှိအောင် လုပ်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် အာမခံပါတယ်” လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်းကို MEG သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
Posted by ရွှေတံခါး at 11:21 PM0comments
ဟိုးတုန်းကတော့ ဒေါင်းပျိုပေါ့.. ဒီလောက် နှစ်တွေကြာမှတော့ ဒေါင်းအိုတွေ ဖြစ်ကုန်ပါပြီ.. အမွှေးတွေ အတောင်တွေ လည်း မစုံတော့ဘူး..။ တုန်တုန်ရင်ရင် လှုပ်စိလှုပ်စိ၊ မပျက်မသားနဲ့..။ အမွေဆက်ခံတဲ့ ဒေါင်းတွေကော မရှိဘူးလား မဟုတ်ပါဘူး.. ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းသွေးစစ်စစ် မဟုတ်တော့ပါဘူး.. ပက်ဝန်းကျင်က လင်းတ သွေးတွေ ရောကုန်ကြပါပြီ.. ဒီတော့ ဒေါင်းပေါက်လေးတွေက ဒေါင်းတစ်ပိုင်း၊ လင်းတ တပိုင်း ဖြစ်လို့..။ ဒေါင်းအိုတွေနဲ့ ဒေါင်းတပိုင်း လင်းတ တပိုင်း ပေါက်စတွေနဲ့ကလည်း မကြာခဏ ရန်ဖြစ်.. အဲ့ဒီ မျိုးမစစ်ဒေါင်းတွေနဲ့ ဒေါင်းအိုတွေကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေ များစွာ ပျက်စီး ယိုယွင်းနေပါပြီ..။ နိုင်ငံကောင်းအောင် တစ်ခုမှလည်း မလုပ်တဲ့အပြင်၊ ကန့်လန့် တိုက်နေတာတွေ ရပ်သင့်ပြီ..။ ဘာမသိ ညာမသိ လူငယ်၊ လူကြီး ရဟန်းတွေလည်း အနီးမှာရှိတဲ့ မျိုးမစစ်ဒေါင်းလင်းတ တွေကြောင့် မိုက်ရူးရဲတွေလုပ်ခဲ့ကြလို့ သွေးမြေကြရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။ အဝေးက မျိုးမစစ် ဒေါင်းလင်းတ များကလည်း ဒေါင်းပုံလေးပြပြီး တောရေး၊ တောင်ရေး (တောကူး၊ တောင်ကူး ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်၊ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေးအသိ၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာမှုနဲ့ ရေးတာ တစ်ခုမှမရှိပါဘူး) တွေကြောင့်.. ပြည်ပရောက် လူငယ်တွေလည်း လင်းတစိတ်တွေဝင်ကုန်ကြပြီး အားရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ထိုးဆိတ်ချင်နေကြပါတော့တယ်။ ကိုယ်တိုင်မထိုးဆိတ်နိုင်ရင်တောင် လင်းတကြီးများကို အားကိုပြီး ထိုးဆိတ်ခိုင်းနေကြတော့ ရှေ့ကိုမရောက်တော့ဘူး။ ဒေါင်းခေတ်လည်း ကုန်တာကြာပါပြီ.. ဒေါင်းအိုတွေလည်း ဖင်ပြောင်နေပါပြီ..။ ဒေါင်းပြပြီး ဒေါ်လာတောင်းနေတဲ့ ဘလော့တွေလည်း ရှက်သင့်ပါပြီ.......။
Posted by ရွှေတံခါး at 11:18 PM0comments
နိုင်ငံရေးကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေ
“မြန်မာ လူမျိုးများရဲ့ နိုင်ငံရေး အသိအမြင် ဗဟုသုတက နိမ့်ကျနေသေး လေတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် အောင်မြင်ပါ့မလား” အသက်နှစ်ဆယ်၊ အစိတ်ဝန်းကျင် လူငယ်တွေနဲ့ စကားပြောကြတိုင်း ဒီမေးခွန်း တစ်ခုကို မေးမြဲဖြစ်တယ်။ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ အနောက် နိုင်ငံကြီးတွေလို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှ ဒီမိုကရေစီ အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ် နေကြဟန် ရှိပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း နိုင်ငံရေးဆိုတာ နှာခေါင်း ရှုံစရာလို့ ယူဆပြီး တစ်သက်လုံး ဝေးဝေးရှောင်ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစား “အီလစ်”(elite) တွေ ပြောတဲ့ စကားသံတွေ ကြားပြီး “နဝေတိမ်တောင်” ဖြစ်နေကြပုံ ရပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ဘိုးဘွားများကို ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေ ရည်မှန်းချက် တိကျ ခိုင်မာပြီး၊ ရန်/ ငါ ပြတ်သား ခဲ့ကြလို့သာ လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တာပါ။ ဒီကနေ့ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေ ထဲမှာ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား ဖြစ်နေတဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံဆိုရင် ၁၉၅၇ ခုနှစ်ကျမှ လုံးဝ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိ လာခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုးများကို နိုင်ငံရေးအသိ နိမ့်ကျတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူး။ မြန်မာပြည် က ရေပေါ်ဆီ လူတွေလောက်က ပြောတာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ အထင်ကြီး ကိုးကွယ်တဲ့ အနောက် နိုင်ငံကြီးတွေက မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကင်ပွန်းတပ်ထားတဲ့ “နိုင်ငံရေးဂုရု” ဆိုသူတွေ ပြောတာလည်း လက်မခံ ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ နေပြီး နယ်ချဲ့ဒဏ်၊ ဖက်ဆစ်ဒဏ်၊ ပြည်တွင်း စစ်ဒဏ်တွေကို ကျောကော့အောင် ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုး တွေလောက် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးကို နားလည်တဲ့လူ ဘယ်မှာမှ မရှိနိုင်ပါဘူး။
မျက်ကန်း မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ဒီလိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခန့်တဲ့ “ဂုရု”တွေ ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ထားဖူးလို့ ပြောတာပါ။ ဆင်စွယ် ရဲတိုက်ကြီးတွေ ထဲက စာအုပ်တွေမှာ လှန်လှောရှာဖွေပြီး သူများတကာ ရေးထားတဲ့ သီအိုရီတွေနဲ့ ချိန်ညှိပြီး ရေးသား ထားတာမျိုး တွေသာ များပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ သိပ္ပံပညာရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့်လို့ ဂျီသြမေကြီ တွက်သလို၊ သင်္ချာတွက်သလို၊ တွက်လို့ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ လူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက် နေတာ ဖြစ်လို့ လူတွေရဲ့ ဘဝ၊ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို အလေးထားပြီး စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေ ကြားမဝင်ဖူးတဲ့ ရေပေါ်ဆီ “အီလစ်”တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသား “ဂုရု”တွေက မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘဝ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို မြန်မာတွေထက် ပိုသိတယ်လို့ ပြောရင်တော့ တော်တော် မျက်နှာပြောင်တဲ့ လူတွေပဲလို့သာ ကောက်ချက်ချလိုက်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရွှေတံခါး at 10:05 AM0comments
ပြောလည်းပြောချင်စရာပါလား.....အမေရေ......ဘယ်လို ယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွဲပေးနိုင်ပါ့မလဲ?
အရင်ဆုံး အမေ့ သားတွေကို စည်းကမ်းရှိအောင် အရင်သင်ပေးလိုက်ပါအုန်းဗျာ...ပြည်သူတွေကို ချစ်တယ်
ပြည်သူတွေကိုအလေးထားတယ်ဆိုအခုတော့ အမေ တို့ အဖွဲကသက်သေတွေပြနေကြပြီပေါ့ ....အမေချစ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ? မိုက်လေးတစ်လုံးနဲ့ စင်မြင်ပေါ်တက်ပြောရတဲ့ အချိန်ကလေးပဲလားအမေ.....လူဆိုတဲ့ အမျိုးကလည်း အာဏာမှာရစ်မှုးပျော်ပါးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက အမေ အတွက်ရောမှန်နေပြီလား........? ကို့ ကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို ကိုကဆိုဆုံးမရင်ရနိုင်ပါတယ်အမေ အမေ့ အနေနဲ့ စည်းကမ်းရှိကြပါ....လိုက်နာကြပါ လို့တခွန်းတလေမပြောပဲ အမေဘာစကားတွေကို မြိန်ရှည်ရှက်ရေ နဲ့ အမေပြောနေပါသလဲ..? အမေ အကြီးကြီးတွေမပြောပါနဲ့ အုန်း အခုအမေလုပ်နိုင်တဲ့အမေ့ကိုချစ်တဲ့အမေ့ပြည်သူတွေကို အမေစည်းကမ်းရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါအုန်း အမေစွမ်းနိုင်မယ်ဆိုပေါ့။
ပြည်သူတွေဆိုတာ ကို့ ရဲ့ သားသမီးတွေပါလို့ အမေပြောဖူးတယ်နော် အလိုလိုက်တဲ့ သား တနေ့ အမေ့ ကိုဒုက္ခပေးမှာမဆိုးရိမ်ဘူးလား.....အမေလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ....ကျွန်တော့်တော့ ရင်လေးမိပါတယ်အမေ... အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ အမေ မိန့် ခွန်းတွေနဲ့အမေလေ....အခုချိန်ထိ ကျွန်တော့်တို့ အပေါ်ဘာလုပ်ပေးခဲ့ သေးလို့ လဲ.....အမေကတော့ပြောမှာပေါ့ ငါ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိတာတဲ့ ..
ဒါဆိုရင်တော့အမေ ကအခွင့်အရေးသမားကြီးပေါ့....လူတော်တွေဆိုတာ...အခွင့်အရေးကိုစောင့်မျော်ပြီး.....ကံကိုသာရိုးမယ်ဖွဲ့ မယ်ဆိုရင်တော့
အခုချိန်ထိ ကမ္ဘာမှာ လူချွန်လူကောင်းတွေရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ.....။ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူချင်တယ် အမေ....အမေ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရတာပဲလိုချင်ပါတယ်....ဒါပေမယ့် အမေက လက်ညှိုးထိုးပြချင်လောက်အောင် စံနမှုနာထားချင်လောက်အောင် ကောင်းကွက်တွေရှာနေတာ ကျွန်တော် အခုချိန်ထိ မတွေ့ သေးပါလား အမေ.....အခု အမေ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတဲ့ အမေ့ ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမေ့ သား၊သမီးတွေက မတူကွဲပြား ထင်မြင်ချက်လက်တစ်ဆုတ်နဲ့ အရင်အစိုးရကို မကြိုက်လို့ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးနဲ့ အမေ့ နောက်ကို ဘုမသိဘမသိနဲ့ လိုက်နေကြတာ.....မသိရင်အမေရယ်....ကုလားဘုရားပွဲလှည့်နေသလိုပဲ......အမေ့ သားတွေကပြောကြသေးတယ်အမေ....
ငါကNLDကဆိုပြီး...လမ်းပြောင်းပြန်ယာဉ်တွေမောင်းလို့ အမေကဒါတွေကိုများ ခွင့်ပြုထားသလားအမေ ။အမေ စဉ်းစားကြည့်ပါ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူတယောက်အနေနဲ့အမေ ကိုယုံကြည်ချင်ပေမယ့် ယုံကြည်လို့ မရဘူး အစကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမေ့မှာရှိခဲ့ လို့ လား.....အမျိုးကိုမချစ်လို့ တောင်အမေကတိုင်းတပါးသားနဲ့ တောင်ယူခဲ့ သေးတာပဲအမေ....အမေ့သမီးတွေကိုအမေ ဘယ်လို သွန်သင်ဆုံးမကြမလဲ....အမေ ။အမေ့ အစားရင်မောမိပါတယ်...“ ငါ့လိုပဲ တိုင်းတပါးသားယူ ကောင်းတယ်”လို့ အမေထောပနာတွေပြုနေမလား......ဟူး......ရင်မောမိပါတယ်အမေ......ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိ စာနာစိတ်မရှိတဲ့ အမေ့ တို့ လိုအဖွဲ့ အစည်းမျိုးတော့.....နိုင်ငံတော်ကြီးကိုပုံအပ်မယ့်အရေး စဉ်းစားဖို့ တော့လိုနေပြီအမေ............။
Posted by ရွှေတံခါး at 12:35 AM0comments
About Forex Online Casino EURO PALACE CASINO FLAG COUNTER Casino Blacklist
PCWorld Myanmar Magazine
ကြည့်တတ် မြင်တတ် စေချင်
Free Software Downloads 1
Free Software Downloads 2
Free Software Downloads 3
အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ အဘိဓာန် (၁)
အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ အဘိဓာန် (၂)
အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ အဘိဓာန် (၃)
သတင်း၊ကဗျာ၊ဆောင်းပါး၊နည်းပညာ၊ဗဟုတုတအားလုံးကို ပြန်လည်ဖြန့် ဝေချင်သော...စိတ်ဆန္ဒသက်သက်မျှသာဖြစ်သည်...။လာရောက်လည်ပတ်သော သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်စီလူတန်းစား...
စည်းခြားရမယ့် ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး
မြန်မာအိပ်စပရပ်ကြောင့် ဒေါ်စု ပိုက်ဆံကုန်ရ